Maxay Cilmiga Infographics-ka Ugu Caansan Yihiin? Tilmaam: Mawduuc, Raadin, Bulsho, iyo beddelaad! | Martech Zone
Maxay Infographics-ka Caan u Yahay? Tilmaam: Mawduuc, Raadin, Bulsho, iyo beddelaad!
Sabtida, Maarso 6, 2021 Thursday, April 7, 2022 Douglas Karr
In badan oo idinka mid ah ayaa soo booqda bartayada 'blog' sababtoo ah dadaalka joogtada ah ee aan ku bixiyay wadaagista suuq-geynta suuq-geynta. Si fudud u dheh… Waan jeclahay iyaga waana dad caan ah. Waxaa jira sababo dhowr ah oo ah sawir-qaadista si fiican ugu shaqeyneysa xeeladaha suuq-geynta dijitaalka ganacsiyada:
Visual - Kala badh maskaxdeenu waxay u heellan yihiin aragtida iyo 90% macluumaadka aan haynno waa muuqaal. Sawirada, jaantusyada, iyo sawirraduba waa dhammaantood dhexdhexaadiyeyaal muhiim ah oo lagula xiriiro iibsadahaaga. 65% dadweynaha waa bartayaal muuqaal ah.
Xasuusta - Daraasado ayaa helay in, seddex maalmood ka dib, isticmaale ayaa hayey kaliya 10-20% macluumaadka qoraalka ama hadalka laakiin ku dhowaad 65% macluumaadka muuqaalka ah.
Gudbinta - Maskaxdu way arki kartaa sawiro soconaya kaliya 13 milliseconds indhaheenuna waxay diiwaangalin karaan 36,000 oo farriimo muuqaal ah saacadiiba. Waxaan heli karnaa dareenka a muuqaal muuqaal ah in ka yar 1/10 ilbidhiqsi iyo muuqaallo ayaa ah si dhakhso leh loo farsameeyay 60,000X maskaxda ka badan qoraalka.
Search - Sababtoo ah infographic wuxuu caadi ahaan ka kooban yahay hal sawir oo fudud oo la daabici karo lana wadaagi karo webka oo dhan, waxay soo saaraan gadaal gadaal xiriiriya kalsoonida iyo ugu dambeyntiina, qiimeynta bogga aad ku daabacdo.
Sharaxaada - Sawir gacmeed si fiican loo qaabeeyey waxay qaadan kartaa fikrad aad u adag oo si muuqaal ah ugu sharraxeysaa akhristaha. Waa farqiga u dhexeeya helitaanka liistada tilmaamaha iyo dhab ahaan daawashada khariidadda marinka.
Tilmaamaha - Dadka raacaya tilmaamaha leh tusaalooyinka waxay ku fuliyaan 323% ka fiican dadka raacaan bilaa sawir. Waxaan nahay bartayaal muuqaal ah!
brandingeksperten - Infograafiyad si wanaagsan loo qaabeeyey waxay ku daraysaa sumadeynta meheradda soo saartay, dhisidda wacyigelinta sumcadda ee ururkaaga hareeraha webka ee bogagga ku habboon ee lagu wadaagayo.
Engagement - Sawir gacmeedka quruxda badan ayaa ka mashquul badan kan qoraalka. Dadku had iyo jeer way baari doonaan qoraalka laakiin dhab ahaantii waxay diirada saaraan muuqaalada ku dhex jira maqaalka, iyagoo siinaya fursad weyn oo ay ku wareerin karaan sawir qurux badan.
Waqti-joogid - Soo-booqdayaasha ka tagaya bartaada waxay caadi ahaan ku baxaan 2-4 ilbiriqsi gudahood. Waqtigaan oo kale oo kooban si loogu qanciyo dadka soo booqda inay laalaadaan, muuqaalada iyo sawir-qaadashada ayaa ah ikhtiyaar fiican oo lagu soo qabto indhahooda.
Wadaagista - Sawirrada waxaa lagu wadaagayaa baraha bulshada wax ka badan wararka qoraalka. Infographics ayaa la jecel yahay oo lagu wadaagayaa warbaahinta bulshada 3 jeer dheeraad ah marka loo eego nooc kasta oo kale ah.
Soocelinta - Suuqgeeyayaasha soosaara sawir-gacmeed weyn ayaa dib u rogi kara sawirada is-dul-dhigga bandhigyadooda iibka, daraasadaha kiisaska, waraaqaha cad, ama xitaa u adeegsan karaan aasaaska fiidiyow sharraxa.
Wadahadal - Faahfaahin kasta oo weyn ayaa qofka ku dhex socodsiiya fikradda waxayna ka caawisaa u kaxeynta wicitaan-ku-fal. Ganacsatada B2B gabi ahaanba waxay jecel yihiin sawir-qaadista maxaa yeelay waxay ku siin karaan dhibaatada, xalka, kala duwanaanshahooda, tirakoobyada, markhaatiyada, iyo wicitaanka-ficilka dhammaantood hal sawir!
Sidoo kale sameynta shaxdayda gaarka ah ee boggeyga iyo macaamiishayda, marwalba waan baadi goobaa webka anigoo raadinaya infographics si loogu daro waxyaabaha ku jira. Waad la yaabi doontaa sida wanaagsan ee ay nuxurkaagu ugu shaqeyn doono qof kale xogtiisa maqaalkaaga… taasna waxaa ka mid ah markaad dib ugu laabanaysid iyaga (oo had iyo jeer ay tahay inaad sameyso).
Xogtaydii ugu dambeysay ee aan u dhiibo macmiil ahaan waxay ahayd mid xog ku saabsan markay ilmuhu ilkahooda soo baxaan dhakhtarka ilkaha ee u adeega carruurta Indianapolis. Infographic-ka ayaa ah mid si weyn loo garaacay isla markaana ah bogga ugu sareeya ee loogu talagay waqtigan xaadirka ah boggooda, iyada oo in ka badan kala badh booqashooyinka ay ku sugan yihiin goobahooda cusub ee la bilaabay.
xiriirka Highbridge Xigasho Infographic ah
Tags: isbeddelkatilmaamahaWaqti sii deghawlgelintasharaxaadImagemacluumaad garaaf ahtirakoobka macluumaadkagudbinta macluumaadkanaqshadeynta macluumaadkaMacluumaadka Suuqgeyntaxusuustadib u soo celinayna search engineSEOla wadaagomuuqaalkabarashada muuqaalka ah
Ma Visual Studio Code ayaa ah Tifaftiraha Nidaamka OSX ee ugu Fiican Suuqa?
5 Dariiqo oo Loo Adeegsado Dhageysiga Bulshada Si Loogu Hormariyo Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Mawduucaaga
Sep 10, 2013 at 8: 23 AM
Waa jeclahay dhammaan shaqada galaya iyaga, laakiin dib u eegista ayaa laga yaabaa inay waxtar leedahay.
“Xiisaha raadinta fiiri” ?????
Sep 10, 2013 at 10: 52 AM
Apr 23, 2014 at 5: 30 PM
Nabade Douglas. Waan jeclahay qoraalkaaga! Tirooyin badan oo xiiso leh oo ku saabsan qalabkan sii kordhaya ee caanka ah ee muuqaalka xogta. Ma ka fikiri kari waayey qaab ka wanaagsan oo aan ku muujiyo waxtarka u gaarka ah sawir-gacmeedka halkii aan isticmaali lahaa. Waxaan ku tiirsanaaday qaybtaada kooban si aan ugu qoro qoraalkayga Dhexdhexaad, halka aan kugu xuso. Waxaan u maleynayay inaad jeceshahay inaad wax ka jabiso: https://medium.com/inbound-marketing-clinic-at-nyu/61033a96ea78. Karinne
Apr 23, 2014 at 7: 09 PM
Waad ku mahadsan tahay sheegista!
Sep 26, 2015 at 2: 35 AM
Uruurinta weyn ee sawirada! Waxaan kaliya jeclahay inaan helo sheeko dhan anoo adeegsanaya wax aan ahayn sawiro. Taasi waa wax xiiso leh. Way ku korayaan isticmaalka taasi waa hubaal!
Oktoobar 18, 2015 at 11:38 AM
Waxaan ugu baahanahay dhammaan macluumaadkaan meelaynta dugsiga. Macluumaad aad u qabow,
Adoo jidka ku jira haddii aad isweydiineyso da'da aan ahay, waxaan ahay kow iyo toban jir oo mar horeba waan jeclahay macluumaadkan. Shaqo wacan, Mr Douglas !!!!!!!!!!!!!
Oktoobar 18, 2015 at 5:50 PM
Taasi waa cajiib Amalshah! Waad ku mahadsantahay qoraalka… waxaad haysaa mustaqbal ifaya.